တရုတ်ပန်းတံဆိပ်ပို့ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အခြေစိုက်စခန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကို Talking | အမြဲစိမ်း
A narrow needle isaflat needle withoutabottom thread. If the needle is not punched at the beginning of the narrow needle, the narrow needle is embroidered and hasagap. It can be used to form lace, fine and dense tapes, and the like. For example,apattern formed byawhite narrow needle onablack fabric requires one or two single needle bottom lines.အဆိုပါဆေးထိုးအပ်လည်းအပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ခြေချုပ်အပေါ်အလွှာတစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းခြင်းကလူပန်း၏အသွင်အပြင်များ၏ပြောင်းလဲမှုကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ထိပ်ပေါ်တွင်အပ် embroidering သောအခါ, လှပတဲ့သုံးရှုထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အချိန် post: မတ်လ-18-2019
ချယ်လှယ်သောတံဆိပ်, Chenille Varsity ပေးစာ T က Patch, Chenille Varsity ပေးစာ, Chenille Patch ပေးစာ, Chenille ပေးစာ Patch ကို, ချိတ်, Loop ယက်တံဆိပ် , အားလုံးထုတ်ကုန်များ- 粤ICP备18108880号-1